Ubuhle - iBezzia | IBezzia
La ubuhle Yintsimi ebanzi kakhulu, apho abasetyhini bafumana indlela yokujongeka intle, njengokuninzi kwaye bazive bekhululekile. Ngesi sizathu, kwimagazini yethu sinika ukubaluleka kweli candelo, eligubungela imimandla eyahlukeneyo ye-aesthetics, ihlala ivela kwindawo yokujonga kwaye inikezela ngeengcebiso zombini zokwenza amaqhinga kunye neendaba zamva nje ezivela kwiimpawu ezinxulumene neli hlabathi.
Kweli candelo, siza kukuxelela iingcebiso zokuphinda uqalise iinxalenye ezahlukeneyo zomzimba wakho, siya kukucebisa iimveliso Ngokwenza oku kwaye siza kujonga nosaziwayo ukuzama ukulandela ubuchule babo, umzekelo.
Iinto zokuzilungisa, iinwele, iinzipho, iziqholo okanye amayeza onyango aya kubakho kweli candelo, eliya kuhlala lihlaziyiwe kwaye liza kukuxelela zonke iimfihlelo zokubonakala ugqibelele.
Iingcebiso zobumba zabaqalayo
por UToñy Torres yenzayo Iiyure ze9 .
Ukwenza ubuso kuyonwabisa, kuyilwa, kuyadlalwa kwaye kufanelekile kubo bonke abo bafuna ukuyisebenzisa ...
Indlela yokufaka iblush ebusweni bakho
por USusana godoy yenzayo Iintsuku ze2 .
Ngaba uyazi ukuba ungayifaka njani i-blush? Kubonakala ngathi yinto elula kakhulu kwaye ayisiyiyo le yokuba kufuneka sizenze nzima kakhulu, kodwa kwi ...
Imvume ye-eyelash: Yonke into ekufuneka uyazi
I-eyelashes nayo kufuneka ihlale ibakhathalela, kuba baya kusinika ukubonakalisa ngakumbi ebusweni kwaye kuba yinxalenye ebalulekileyo ...
Pedicure yobungcali: Uyenza njani inyathelo ngenyathelo
Ngaba uyafuna ukufumana i-pedicure yobungcali? Ke akukho nto kukulandela uthotho lwamanyathelo asisiseko kunye nokuzazisa ngokwakho ukukwenza kakuhle ...
Amanyathelo abalulekileyo kwinkqubo elungileyo yobuhle
Ukulandela inkqubo entle yobuhle kubalulekile ukonwabela ulusu olusempilweni kwaye oluhle. Kodwa namhlanje ...
Iindlela ezi-4 zokwenza ukuwa kuka-2021
Ukwindla kunkqonkqoza emnyango kunye nayo, iindlela ezintsha zokwenza izinto eziza kunika umbala ku ...
Iindlela ezinkulu kwimibala yeenwele koku kuwa
Ukuba kukho imikhwa emihle yefashoni yexesha elitsha, kuyakubakho ngokwembala yeenwele….
Ukudibanisa iinwele zangasemva emadodeni
Ngaba uyafuna ukubonisa i-hairstyle yangoku kunye neenwele emva kwamadoda? Nangona kuqhelekile kubafazi ukubona ...
Ngaba ufuna izimvo ezintsha zeenwele zesikolo esiphakamileyo? Kungenxa yokuba ikhosi iqala ngoku kwaye ngenxa yoko, akukho nto ilunge ngakumbi kunokwenza ...
Wenza njani amehlo akho kwaye ufumane ezona zinto zinokwenzeka xa unxiba iiglasi
Ukubeka amehlo akho ukuba unxibe iiglasi kunokuba yinto ephazamisayo xa ungazi ukuba ungayenza njani. Iiglasi ziyenza ...
Veza ubume bokubuyela emsebenzini
Lixesha lokuba ubuyele emsebenzini kwaye awazi ukuba ungazifaka njani ngokukhawuleza izithambiso ukuze ubonakale umhle ngaphandle komzamo omncinci? Yi…
Indlela yokuphatha isikhonkwane esimnyama
Ukudumba kobuso xa uvuka, oonobangela kunye noncedo lwayo
Iperoksayidi yeHydrogen kwizinwele, ubuhle kunye neengozi
Kukwacetyiswa kangaphi ukuba idayi
Ungalisusa njani ivumba lecuba kwizinwele zakho
Indlela yokuphilisa isikhonkwane
Ungayisebenzisa njani i-aloe vera kwizinwele
Ungayisusa njani ioyile ezinweleni, amaqhinga asebenza ngokwenene
Iindidi zokolula iinwele kwaye ukhethe eyiphi
Ungazomisa njani iinwele ezicocekileyo
I-enamel ekufaneleyo ngokwethoni yesikhumba sakho
Eyona thoni yeenwele icekethekileyo yabafazi abancinci
Iintsomi kunye nenyaniso malunga nedayi engena-ammonia kufuneka uyazi